Shabakadda Raadinta ee Apple ayaa hadda la jaanqaadaysa agabka dhinac saddexaad | Wararka IPhone
Apple ayaa kaliya ku shaacisay warsaxaafadeed shabakadda Raadinta cusub ee la jaanqaadi kara qalabka saddexaad, iyo soosaarayaasha ugu horeeya waxay horeyba u shaaciyeen qalabkooda iswaafajin doona usbuuca soo socda.
Codsiga Raadinta wuxuu gacan ka geysanayay soo kabashada iphone-yada lumay sanado badan, waxyarna tartiib-tartiib ayay ku kasbatay howlo cusub iyo aalado iswaafajinaya, laakiin had iyo jeer nidaamka deegaanka ee Apple. Hada agabyada sadexaad ee sadexaad awoodooda shabakadan Raadinta waa la badiyay.
In ka badan toban sano, macaamiisheennu waxay ku tiirsanaayeen Raadinta My si loo helo aaladooda Apple ee lumay ama la xaday, dhammaantood iyagoo ilaalinaya asturnaantooda. Waxaan hada keenaynaa awoodaha raadinta ee awooda badan Raadinta My, mid kamid ah adeegyadeena ugu caansan, dad badan oo leh barnaamijka Find My network accessories. Waan ku faraxsanahay inaan aragno sida Belkin, Chipolo, iyo VanMoof ay u adeegsanayaan tikniyoolajiyadan, mana sugi karno inaan aragno waxa la-hawlgalayaasha kale abuurayaan.
Barnaamijkan cusub ee soosaarayaasha qeybta saddexaad wuxuu qeyb ka noqon doonaa "Made for iPhone" (MFi). Dhammaan alaabooyinka waa inay u hoggaansamaan mid kasta oo ka mid ah tallaabooyinka amniga ee Apple iyo xaaladaha asturnaanta. Waxyaabahan la aqoonsan yahay ee MFi ayaa lagu dari karaa tabta "Objects". oo waxay lahaan doonaan wax sooc ah oo caddeeya iswaafajintooda. Qalabkani wuxuu awood u yeelan doonaa inuu adeegsado qalabka loo yaqaan 'Apple's U1 chip', si meesha ugu jirta barnaamijka Raadintu uu u noqdo mid sax ah.
Baaskiiladii ugu dambeeyay ee korantada S3 iyo X3 Vanmoof, XORRIYADDA SOUNDFORM Dhagaha dhagaha dhagaha wireless wireless ka Belkin iyo maqaalka raadiyaha Chipolo ONE Spot ayaa noqon doonta aaladaha ugu horeeya ee taageera shabakadan cusub ee saddexaad ee Raadinta. Apple waxay xaqiijisay inay jiri doonaan soosaarayaal cusub oo ku biiraya shabakada Raadinta. Shabakadani waxay ka koobnaan doontaa malaayiin aalado Apple ah oo si qarsoodi ah iyo iskaashiba gacan uga geysan doona helitaanka aaladaha iswaafajiya, xitaa haddii iPhone-ka naqshadeynta uu ka fog yahay mayl. Asturnaanta nidaamkan waxaa damaanad qaadaya sirta dhamaadka-ilaa-dhamaadka, si Apple ama soo saaraha midkoodna u awoodi doonin inuu ogaado meesha ay aaladuhu ku yaalliin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Shabakadda Apple ee Find ayaa hadda la jaanqaadaysa qalabka saddexaad
Haddii shabakadda Raadintu ay ku xirnaan doonto U1 Chip, waxaan fahamsanahay dib u dhaca kuwa ka imanaya Cupertino ee bilaabidda Airtags oo sidaasna waqti ugu helaya joogitaanka aaladaha (iPhone 11 iyo 12 oo leh noocyadooda kala duwan) si ay u awoodaan inay helaan trackers. Aakhirka waxay noqon doontaa sida Samsung oo kale… Uma arko inay maanta waxtar badan leedahay.